China iAluminiyam-ngesandla ephothiweyo (AV-T78) abavelisi kunye nabathengisi | I-Aviva
4 Sihlalo wentambo ephothiweyo (Ubungakanani be-Olefin 15mm)
Sihlalo: 47 * 61 * 88CM
Izibonelelo zokukhetha ifanitshala eyenziwe ngentambo ephothiweyo
Ifanitshala eyenziwe ngentambo ephothiweyo inokuba lukhetho olufanelekileyo kubantu abafuna izinto abanokuzishiya ngaphandle unyaka wonke. Kungenxa yokuba intambo ephothiweyo iyamelana kakhulu nazo zonke iintlobo zemozulu kubandakanya imimoya enamandla kunye nemvula.
Esinye isibonelelo sefenitshala yentambo ephothiweyo ngokwemozulu kukuba ayipheli ngokulula xa ivezwe elangeni. Izinto eziphathekayo ziqulethe i-polypropylene enika ukhuseleko lwendalo ekuphelisweni kwelanga kunye namandla ongezelelweyo. Abanini bamakhaya bangashiya ifenitshala yangaphandle kwipatio kuwo onke amaxesha onyaka ukuba banqwenela ngaphandle kokukhathazeka ngomonakalo wemozulu. Ewe kunjalo, kuhlala kungumbono olungileyo ukukhusela okanye ukugubungela ifanitshala xa ulindele iimeko zemozulu ezinzima.
Sicinga ngokubeka izihlalo zethu zentambo ephothiweyo malunga nendawo yonke. Isitulo ngasinye senziwe ngesakhelo se-aluminium, kwaye sineengalo ezibuyisiweyo ezibuyiselwe ukujonga umoya opholileyo okunceda ukukugcina upholile xa imozulu ishushu. Ezi zitulo zifika zihlanganisene, ukuze usete kwaye wonwabele imozulu eshushu ngokukhawuleza.
FANITSHALA EYODUMO EYODWA EYODWA
Intambo ephothiweyo inika imbonakalo ethambile ngakumbi kunolunye uhlobo lwezinto zefanitshala ezinjengentsimbi okanye ialuminium. Oku kunokwenza ipatio okanye enye indawo yangaphandle ibonakale yamkelekile kwiindwendwe. Ukongeza ingubo encinci okanye ukuphosa umqamelo kwenza ukuba kubonakale nje ngokumema njengefanitshala yangaphakathi kwaye kufuneka benze iindwendwe bazive besekhaya. Izitulo ezitsha zePalisades (eziboniswe ngezantsi) zibonisa indlela izinto ezenziwe ngentambo ephothiweyo ezinokuphambuka ngokungaqhelekanga ngayo.
Egqithileyo IAluminiyam-ephothiweyo (AV-T76)
Okulandelayo: Iseti yeBistro ephothiweyo yeAluminiyam (AV-T103)
Iseti yeBistro ephothiweyo yeAluminiyam (AV-T16)
Iseti yeBistro ephothiweyo yeAluminiyam (AV-T103)
Iseti yeBistro ephothiweyo yeAluminiyam (AV-T23)